Nikhil Upreti (Nepali Actor)
Topic: Nikhil Upreti (Nepali Actor)
Author Topic: Nikhil Upreti (Nepali Actor) (Read 39355 times)
Re: Nikhil Upreti (Nepali Actor)
« Reply #20 on: May 20, 2016, 03:34:07 AM »
« Reply #21 on: May 20, 2016, 07:09:20 PM »
« Reply #22 on: April 11, 2018, 11:03:53 AM »
« Reply #23 on: April 11, 2018, 11:05:01 AM »
« Reply #24 on: April 14, 2018, 11:24:10 AM »
निखिल उप्रेती भन्छन– म प्लेब्वाई होइन, दुबै श्रीमतीलाई मिलाएर राखेको छु, दुबैको बीचमा बाँच्न चाहन्छु
ठीक १० वर्षपहिले, अर्थात् ०६३ सालको यो बेला निखिल उप्रेती र उनीजस्ता केही फिल्मी कलाकारलाई सिनेमाको पर्दामा देखिएन । उनीहरु देशलाई शाही शासनको चंगुलबाट मुक्त गराई लोकतन्त्र बहालीको आन्दोलनमा सरिक थिए । आज ‘कथा’ ले समयलाई १० पछि ल्याइदिएको छ । निखिलहरु किन त्यो आन्दोलनमा थिए ? ती अपेक्षा पूरा भए÷भएनन् ? यी हुन् आम प्रश्न । देशको कथामात्र बद्लिएन,स्वयं हिरो निखिल उप्रेतीको कथा पनि बद्लियो । उनले नायिका सञ्चिता लुइँटेलसँग दोस्रो विवाह गरे । पहिली पत्नी कोपिला र उनका सन्तानमाथि अन्याय भयो भनेर सञ्चारका साधनमा निक्कै चर्चा भयो । त्यस लगत्तै भारत गएका उनी दुई वर्षअघि मात्र देश फर्किए । उनी सर्लाहीका बासिन्दा र त्यहाँका एमाले सांसद हरि उप्रेतीका भाई हुन् ।
१० वर्षअघि आन्दोलनमा हिँड्दाका आशा के थिए ?
– जनताको अधिकार प्राप्त नभएसम्म हामी कलाकार पनि अधिकारसम्पन्न हुँदैनौँ भनेर हामी आन्दोलनमा गएका थियौँ । तर, आज १० वर्षपछि फर्किएर हेर्दा हामीले एकथोक पायौँ, बाँकी सबथोक जस्तोको तस्तै रह्यो । हामीले चाहेको कुरा बोल्न पायौँ । तर, बोल्नबाहेक केही पनि पाएनौँ । चुनावमा नेतालाई भोट हालेर जिताउनका लागि मात्र हामी जनता अधिकारसम्पन्न भयौँ । तर, हामी हाम्रो पहुँच र अधिकारका कुरामा नेताका दास भयौँ । हिजो अधिकार माग्दा हामीलाई पुलिसले पिट्यो, थुन्यो । आज आवाज उठाउँदा हामीलाई पुलिसले पिट्दैन, थुन्दैन । तर, आवाजको सुनुवाई भएन । लोकतन्त्र आएपछि विभिन्न ठाउँमा पुल बन्यो, पिचरोड बन्यो । सञ्चारको विकास भयो । तर, आधारभूत रुपमा जनताले जे चाहेका थिए, ती कुरा अझै प्राप्त भएको छैन । विशेषतः मधेशका जनताले ।
धर्मनिरपेक्ष ठीक थियो ?
– कतिपय कुरा समयभन्दा पहिला आयो भने घातक हुन्छ । धर्मनिरपेक्ष त्यस्तै हो । यतिबेला आएर धर्मनिरपेक्षको सट्टा धर्मसापेक्ष भन्नु वा हिन्दू धर्म भन्नु गलत हुन्छ । समयभन्दा पहिले नै भए पनि हामीले सोच विचार नगरी देशलाई त्यो दिशातिर लगिसक्यौँ । समयअघि नै भएका कारण यसबाट झेल्नुपर्ने समस्या बाँकी नै होलान् ।
समयभन्दा पहिला कुन अर्थमा ?
– कुनै पनि कुराको विकास जनताको चेतनाको विकासको रफ्तारसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ । धर्म भनेको त आस्था हो । म ब्राह्मणको छोरो भन्दैमा मैले जनै नलगाएको पनि हुनसक्छ । मलाई मुस्लिम समुदायको रितिरिवाज प्यारो लाग्न सक्छ । अथावा, एउटा मुस्लिमलाई हिन्दूको कल्चर राम्रो लाग्न सक्छ । तर हाम्रो समाजको चेतानमा त्यति धेरै उदारता आएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा मलाई यो कुरा त्यति ठूलो लाग्दैन । तर, चेतनाको कमी भएको देशमा यस्ता कुरालाई जनताको सेन्टिमेन्टसँग दाँजेर हेर्ने काम भएको छ ।
मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको छ । तपाईं त्यसको पक्षको विपक्षको ?
– मैले भैरव फिल्म बनाएँ । त्यसमा तराईको पोलिटिक्समा देखिने नाङ्गो नाच, पार्टीका उद्देश्यविपरित र जनताको हितको विपरित हुने गतिविधिलाई फिल्ममा ल्याएँ । हाम्रो देशको राजनीतिमा पहाडतिर साह्रै राम्रो छ भन्ने मेरो भनाइ होइन । तर, विशेषतः तराईमा जनता अपहेलित छन्, शोषित छन्, अवसरबाट बञ्चित छन् । तर, त्यहाँका पार्टी र नेताले जनताको त्यो दुःख कष्टलाई बुझेका छैनन् ।
काठमाडौंले मधेसको कुरा बुझ्ने त टाढाको भयो,त्यहीँका जनताले भोट दिएर जितेका नेताले पनि त्यहाँका जनताका दुःख बुझेका छैनन् । त्यसैले म मधेस आन्दोलनको पक्षधर हुँ, यसअर्थमा कि म पनि मधेसीको छोरो हुँ । तर, आन्दोलनको नेतृत्व इमान्दार नहुँदा आन्दोलनकै नाममा हामी मधेसीमाथि पक्षपात गरिएको छ । हेर्नुस्, संविधान जारी भएपछि मधेसमा आन्दोलन भयो । म मेरै घर सर्लाहीमा थिएँ । त्यहाँ कुनै पार्टीले आह्वान गरेर आन्दोलन भएको थिएन । मधेसी जनता आफैँ संविधानबाट अधिकार चाहियो भनेर आन्दोलनमा हिँडेका थिए । पछि मधेसवादी दलले त्यसलाई क्यास गरेको मात्रै हो । हो, यसलाई भनिन्छ, स्वार्थी नेतृत्व । मधेसको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको स्वार्थी नेतृत्व हो, जसले जनताको हैन, केही मुठ्ठीभरका नेताको मात्र भनाइ खोज्दछ ।
यो बीचमा तपाईंलाई राजनीतिक रुपमा कुनै अफर आएन ?
– हाम्रो कलाकार समाज कस्तो छ भने– कुनै पार्टी पावरमा आयो कि, फुलमाला लगाएर त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्न गुटुटु कुद्छन् । त्यो पार्टी भोलि पावरलेस भयो भने त्यही पार्टीको विरोध गरेर हिँड्छन् । म त दावाका साथ भन्छु कि,म पोलिटिकल्ली कल्चर्ड मान्छे हुँ । पोलिटिक्सलाई म प्रोफेसन बनाउन चाहन्नँ । मैले गर्ने काम यही फिल्मकै हो । म कोही पावरमा आयो र कोही पावरबाट गयो भनेर गुटुटु कुद्ने मान्छे परिनँ । त्यसैले चुनावमा टिकट दिन्छु,हामीलाई सहयोग गर भन्नेहरु पनि आए । त्यसमाथि पनि मेरो दाजु एमालेको नेता, सांसद हुनुहुन्छ । उहाँको खिलाफमा भाइलाई उतार्न पाए भनेर पनि विरोधीहरुले ताक्न सक्छन् । तर, मैले यत्ति कुरा बुझेको छु कि, निखिल सबै जनताको कलाकार हो । हिजो जनताको अधिकारका लागि आन्दोलनमा लागेको हो । र, आज कसैको झण्डा बोक्दैन ।
कहिलेदेखि राजनीतिक कुरामा ख्याल गर्न थाल्नुभएको ?
– मैले जनकपुरमा क्याम्पस पढेको । त्यहाँ नेविसंघ र अखिलको मारामार चल्थ्यो । मैले अखिलमा भोट हालेँ । त्यसपति म आफ्नो करिअर बनाउन मुम्बई गएँ ।त्यसैले राजनीति मेरो लागि इन्ट्रेस्टको विषय हो । चासो राख्छु । तर, यो र त्यो भनेर रोज्दिनँ । घरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी त हसियाँ–हथौडाकै झण्डामुनि हुर्किएका हौँ । बुबा र दाइहरु पार्टीको काम गर्नुहुन्छ । थुप्रै भूमिगत नेता हामीकहाँ आउनुहुन्थ्यो । पार्टीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो ।
फिल्म लाइनमा लामो समय हराएर आउनुभयो कि, किन ?
– मैले सञ्चिता लुइँटेलसँग दोस्रो विवाह गरेँ, यसकारण हराएँ भन्ने यदि तपाईंलाई लागेको छ भने त्यो गलत हो । अहिले आएर मैले सञ्चितासँग गरेको विवाहको बारेमा स्केप हुन खोज्ने कुरा गलत हुन्छ । हो, त्यतिबेलाका लागि सामाजिक रुपमा मैले त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो होला । तर, त्यत्तिकै लागि देश छोडेर गएको चाहिँ होइन । कारण के हो भने, सयवटा फिल्म खेलेपछि मैले रेस्ट खोजेँ । मलाई फिल्म खेल्नु, सुपरस्टार बन्नु र वाहवाही कमाउनुमात्र छैन । मलाई त मेरो लाइफ चाहिन्छ । अक्सर कलाकार अर्काको वाहवाहीमा बाँच्छन्, आफ्नो बिर्सिसकेका हुन्छन् । दिनभर उफ्रिएर सुपर स्टार बन्छन्, रातभरि ढाड दुखेर सुत्न सक्दैनन् । मैले सोचेँ, त्यो वाहवाहीले मेरो लाइफ बिग्रिरहेको थियो । मलाई ध्यान र योगा चाहिएको थियो । म किसानको छोरोलाई उड्ने चाहना थियो । त्यसैले मैले हवाई जहाज नै उडान त जानिनँ । तर, स्काई ड्राइभर भएर आएँ । प्याराग्लाइडिङको एक्रो कोर्स पनि गरेँ ।
सञ्चितासँगको विवाह गलत हो ?
– होइन । शुरुमा जतिबेला त्यस्तो निर्णय मैले लिँदै थिए, त्यतिबेलाका लागि त्यो निर्णय गलत हुनसक्थ्यो होला । तर, आज हामीसँग हामीमात्रै छैनौँ,दुई सन्तान पनि छन् । त्यसैले आज त्यो गलत र सही भन्ने दिन होइन । मैले कोपिला र सञ्चिताजस्तो जीवन साथी पाएर जुन सुखी जिन्दगी पाएको छु, दावा गर्छु अक्सर कुनै केटा मान्छेले त्यस्तो जिन्दगी विरलै पाउँछ ।
अरुलाई पनि यस्तै गर्न भन्नुहुन्छ ?
– यस्तो कसैले गर्नुहुँदैन, गलत हुन्छ । कानुनी रुपमा गलत हुन्छ, सामाजिक रुपमा गलत हुन्छ ।
तपाईंले चाहिँ किन गर्नुभयो त ?
– मेरो लाइफको फिलोसपीसँग त्यो कुराले सरोकार राख्छ । मलाई मान्छेले प्लेब्वाई पनि भनेँ । तर, आजसम्म म कहिले पनि यसलाई पट्याउँछु, त्यसलाई फकाउँछु भनेर हिँडिनँ । हो, कुनै बेला सज्जासँग मेरो चर्चा चल्यो । आज सज्जा आफ्नो परिवारसँग खुशी र सुखीसँग बसेकी छ । बीचमा श्वेता तिवारी आइन्, उनले मेरो लागि प्रेममा पागलपन देखाएर गइन् । मलाई उनीबाट बच्न निक्कै मुस्किल भयो । त्यसपछि सञ्चितासँग भेट भयो । म यसबाट भाग्न सकिनँ । प्रेम थियो । प्रेमले आखिरी मोड पाउनुपथ्र्यो पायो पनि ।
कोपिला र त्यतातिरका सन्तानका लागि त अन्याय भएन ?
– अन्यायमात्र हैन, अपराध पनि भयो । तर, मैले मेन्टेन गरेँ । आजको दिनमा मैले दुबैको माया पाएको छु, दुबैलाई माया दिएको छु ।
यस्तो चलनलाई के भन्नुहुन्छ ?
– हाम्रो सोसाइटी ब्याकडोरबाट चलेको हो । अगाडिबाट इमान्दारिता छ,पछाडि ९० प्रतिशत बेइमानको झुण्ड छ । डान्सबार जानुस्, तपाईंले बिहेबारी भएका मान्छेबाहेक कोही भेट्नुहुन्नँ । टिनएजर्सलाई तपाईं कहिले पनि त्यहाँ भेट्नुहुन्न । पुलिसले होटेल रेड गर्दा को समातिन्छन् ? अर्काको श्रीमान्सँगअर्काकी श्रीमती , यसलाई ब्याकडोर सोसाइटी भन्छन् । यहाँ त घरमा एउटी श्रीमती देखाएर बाहिर चारवटीसम्म पाल्ने मान्छे छन् । कम्तिमा मैले घोषितै रुपमा दुईवटी श्रीमतीलाई मिलाएर राखेको छु र कुनै तेस्रो महिलासँग मेरो त्यस्तो सम्बन्ध छैन । भन्नुस् कि, कोपिला मेरी श्रीमती हो भन्दै मैले बाहिर रिता, गीताहरुलाई राख्नु इमान्दार हुन्थ्यो ? कदापि हुँदैन ।
रेखा थापासँग इगो थियो । अहिले कस्तो छ ?
– जब म इण्डिया बसेर फर्किएँ, तब यहाँका पुराना इगोहरु सब बिर्सिएर काम गरुँ भन्ने लाग्यो । भैरव फिल्मका लागि एउटा आइटम गानाका लागि मैले रेखालाई अफर गरेँ । ‘हुन्छ’ भनिनँ । पछि उनले गरिनन् । अनि थाहा पाएँ, नगर्नकै लागि पहिला गर्छु भनेकी रहिछन् । ‘निखिल आयो, मलाई घरमै आएर फिल्मको अफर ग¥यो, मैले मानिनँ’ भनेर मिडियाबाजी गर्नका लागि उनले यस्तो हर्कत रचेकी रहिछन् । म झुक्ने कुरामा कहिल्यै पनि लाग्दिनँ । रेखासँग कुनै रिस,द्वेष छैन । मलाई देखाएर मिडियामा प्रपोगण्डाबाजी रच्ने काम भयो, त्यसको पनि जवाफ दिने कुनै दिन आउला ।
सांसद हरि दाइसँग कत्तिको भेट हुन्छ ?
– म प्रायः विहानको खाना दाइसँगै खान्छु ।
बस्नचाहिँ कोसँग बस्नुहुन्छ ?
– म दुबै श्रीमती बस्ने ठाउँको बीचमा बस्छु । ता कि, मैले दुबैलाई उत्तिकै माया दिन पाऊँ, दुबैबाट उत्तिकै माया पाऊँ ।
« Last Edit: December 08, 2021, 01:29:03 PM by tundikhel »
« Reply #25 on: April 14, 2018, 12:15:56 PM »
yo bhanda dope interview
aru kunai chaina
« Last Edit: April 14, 2018, 12:31:44 PM by samir211 »
« Reply #26 on: April 14, 2018, 12:34:19 PM »
Abhay Deol Rohit Shetty ko action guru
« Reply #27 on: April 15, 2018, 01:40:28 AM »
Quote from: samir211 on April 14, 2018, 12:15:56 PM
« Reply #28 on: April 26, 2018, 07:14:55 PM »
feri pani tops interview
rekhanilbil.jpg (20.6 kB, 476x249 - viewed 379 times.)
« Reply #29 on: March 23, 2019, 07:48:25 AM »